Izindaba - Qingdao All Universe Machinery Equipment Co., Ltd yasungulwa ngo-2008 ……
Qingdao Zonke Universe Imishini Equipment Co., Ltd yasungulwa ngo 2008 ……
Qingdao Zonke Universe Imishini Equipment Co., Ltd yasungulwa ngo-2008, elise Qingdao okuyinto enhle ethekwini idolobha eSifundazweni Shandong. Nikeza izinhlobo eziningi zemishini yokuzivocavoca njenge-trampoline, ibha yokuphotha, ibhayisikili eliphothayo, umgwedli wamanzi njll, uneminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kwe-OEM futhi sithumele imikhiqizo yethu emazweni amaningi.
Sithola imibono eminingi evumayo evela kumakhasimende ethu. Inkampani yethu inolwazi olunothile lokuklama, ukukhiqiza imishini yokuzivocavoca umzimba, futhi yadlulisa isitifiketi se-ISO 9001 System Management System, isitifiketi se-CE.
Ngama-25,000 square metres nabasebenzi abangaphezu kuka-150, sihlala sikholelwa ukuthi ukwethembeka ingcebo enkulu kunayo yonke. Siyaqiniseka ukuthi singakunikeza okufunayo ngezinsizakalo zethu ezihamba phambili. Ukwakha igama lomkhiqizo nokuthwala isibopho sezenhlalo njengemishini yokwenza umnikelo ekuthuthukiseni imbangela yezempilo.
Ikhwalithi nokusebenza kuyisiko lethu!
Gcina ukusungula nokwenza ngcono!
Ukuze ube ngumholi webhizinisi!
Siyethemba ukuthi sizokhetha kahle!
Ukuphotha Ibhayisikili, Ukuzivocavoca Ukuhamba ngebhayisikili, Pocket Massage Isibhamu, Massage Gun 30 Ijubane, Ibha ye-Iron Gym Yokudonsa, Isibhamu Esincane Sokubhucunga,